» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १४
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १४
८ बैशाख २०७७, सोमबार ०८:२५
मकवानपुर, ८ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । यस भिडियो सिरिजमा हामी नेपाल स्टारको अडिसन राउण्डबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भिडियो सिरिजको चौधौँ भागमा धनगढी अडिसनबाट छानिएका थप ३ जना प्रतियोगीहरु रिवाज घतानी, धर्मेन्द्र सुनार र अर्जुन पार्कीका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
४) रिवाज घतानी– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका चौथो प्रतियोगी हुन् रिवाज घतानी । उनले अडिसनमा एज ब्याण्डको ‘मेरो आँशु’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
५) धर्मेन्द्र सुनार– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका पाँचौँ प्रतियोगी हुन् धर्मेन्द्र सुनार । सुदुरपश्चिम बाजुराका धमेन्द्र २३ वर्षका छन् । सुनचाँदी व्यवसायमा रहेका धर्मेन्द्रले आर्थिक अवस्थाका कारण प्लस टु मा नै औपचारिक अध्ययन रोक्नुपर्यो । तर उनी संगीतमा भने थप निखारिदै गएका छन् । सानैदेखि संगीतमा लाग्ने सपना देखेका धर्मेन्द्रले औपचारिक रुपमा संगीत भने सिकेका छैनन् । यसअघि पनि विभिन्न गायन प्रतियोगितामा सहभागी भएका धर्मेन्द्रले आफ्नै ओरिजिनल गीतहरु पनि बजारमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘रेलको टिकट’ बोलको गीत गाएका थिए । निर्णायकहरुले दोस्रो गीत गाउन आग्रह गरेपछि उनले ‘मान्छेलाई मान्छेले’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
६) अर्जुन पार्की– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका छैटौँ प्रतियोगी हुन् अर्जुन पार्की । उनले अडिसनमा ‘सागर बरु सुकेर गै जाला’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो चरणका लागि छनौट भएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।